Dementia - famantarana, karazana ary fomba fitsaboana
Psychology and Relationships Fantaro ny tenanao
Dementia - ahoana ny fomba hisorohana ny aretina amin'ny faharanitan-tsaina?
Ny fahasimban'ny saina, ny demaia, dia afaka maneho ny tenany avy hatrany aorian'ny nahaterahany, izany hoe hiankinan'ny aina, na efa tratra taona, raha mahazatra ny miresaka momba ny dementia leo. Maro ny antony mety hahatonga ilay aretina amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainana. Azo alaina hanitsy ve izy io?
Inona ny dementia?
Ny pathology dia mety hitarika ho amin'ny fahaverezan'ny fahaiza-mieritreritra, satria ny dementia dia fahalemen'ny fahatsiarovana, fihenan'ny famatsiana hevitra sy fahalalana. Miaraka mandrakariva amin'ny faharesen'ny rafi-pitabatabana sy ny fandringanana ny sela ao amin'ny atidoha izany. Ny olona dia very ny fifamatorana misy eo amin'ny zavamisy sy ny zava-misy manodidina. Ny fihetseham-po ara-pihetseham-po sy ny toetra amam-pihetseham-po dia miha-ratsy, ny fahafahana maneho fihetsika manakiana ny fitondran-tenan'ny tenany sy ny teniny dia very. Hatramin'ny vao haingana, ny tsy fandriampahalemana toy izany dia tsy hita afa-tsy amin'ny zaza vao teraka sy ny olona efa 65 taona mahery, fa vao haingana dia lasa "tanora kokoa" ny aretina.
Dementia - famantarana
Ny fiantraikan'ny aretina amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe dia mety miovaova. Ny fahasamihafana ara-tsaina dia manana toetra manokana izay azon'izy ireo hivoatra aorian'ny fotoana tena mahazatra sy feno ny atidoha. Ny fiankinan'ny fiterahana amin'ny zaza dia antsoina hoe oligofenia. Ny anjara andraikitra goavana eo amin'ny fampandrosoana dia taratry ny fototarazo sy ny fiantraikany avy any ivelany, ohatra, ny antitra na ny voan'ny aretina. Ny famantarana ny fisian'ny demony dia:
fihenam-bidy sy fifantohana;
fiasa ara-tsaina, izay mihoatra noho ny fitsipika;
tsy fahafahana hahatakatra sy hahatakatra izay mitranga.
Raha toa ka teraka ara-dalàna ny zaza, dia mety ho takatra amin'ny hoavy ny fanombohan'ny aretina dia ny fahamendrehana na ny fahaverezan'ny fahaiza-manao taloha, ny fahasimban'ny fiteny, ny fampitomboana ny voambolana , ny olana amin'ny fifandraisana, sns. Ao amin'ny olon-dehibe dia maneho ny tena fisian'ny demony:
Hadisoana fahatsiarovana. Mandritra izany fotoana izany, ny fahatsiarovan-tsakafo fohy aloha dia mijaly, ary avy eo fahatsiarovana maharitra.
Fahavoazan'ny fahafaha-mahita ny mari-tsoratra amin'ny habaka sy ny fotoana.
Ny fitiavan-tena mandroso.
Ny fahafahana mandany ny fisainana ara-lojika.
Hevitra misavoana, maneso.
Nampitombo ny fahatsapana ho mampatahotra, ny ranomaso, ny fanahiana, ny hatezerana, sns.
Ankoatra ny fizarana ny demenia miafina sy ny dementia noraisina, dia misy koa ny dementia ifampizarana, mizara amin'ireto karazany manaraka ireto:
Ny Epileptika , ny sehatr'asa fampivoarana azy dia ny epilepsy.
Vascular dementia . Ao amin'ny fampandrosoana, andraikitra manan-danja dia asehon'ny atherosclerose ao amin'ny atidoha.
Traumatic , izay vokatry ny trauma.
Alcoholika . Ny faharesen'ny atidoha dia miseho manohitra ny fihanaky ny alikaola.
Schizophrenic . Miaraka amin'ny schizophrenia izy.
Psychogenic . Izy io koa dia antsoina hoe dementia imaginé, izay mandalo amin'ny tenany.
Nihena ny toe-tsaina . Mandritra izany fotoana izany dia mihena kely ihany ny asa ara-tsaina.
Ny antony mahatonga ny fipoahana dia tsy voavaha tanteraka. Amin'ny taona, mihemotra ny fihetsiky ny biochemika rehetra amin'ny vatan'olombelona, ​​ny sasany dia tsy mitombo noho ny fampandrosoana ny aretina. Ny dementia amin'ny zokiolona dia manomboka mandroso tsikelikely. Adinoy ireo fahaiza-manao noraisina teo aloha, ary misy olona vaovao tsy afaka mianatra ny fomba tsy ahafahana manatsara ny fampahalalana, mamintina ny fehin-kevitra ary manombana tsara ny tenany sy ny hafa.
Ny toetra ratsy manjaka dia manjavona: ny hakamoana, ny fahasosorana, ny hatezerana, ny fitsiriritana. Mitombo ny fahalianana, ary ny fomba fijery dia mody. Ny henatra sy ny fanoloran-tena amin'ny fenitra ara-moraly sy ara-ethika dia very. Amin'ny tranga goavana, ny fanimbana tanteraka sy ny fanavakavahana ny olona dia voamarika. Ny fitsaboana dia mitaky fikarakarana sy fanaraha-maso tsy tapaka, satria tsy afaka manompo ny tenany izy.
Ny fanafihana be dia be no mahatonga ny atidoha sy ny fampiroboroboana io fikolokoloana ara-tsaina io. Ny soritr'aretina lehibe dia ny fampihenana ny dingana ara-tsaina. Ny olona malemy saina dia tsy afaka manasaraka ny ankilany avy any ambony. Ny kabariny dia mirona amin'ny templates, saingy afaka miteny haingana izy ary tsy manadino ny fitenenana.
Ao anatin'ny resadresaka ara-dalàna dia maniry ny hanazava ny zava-drehetra ireo marary ireo, mba hamaritana azy io loatra. Amin'ity tranga ity dia mijaly ny faniriana hanalavitra sy hanelingelina azy ireo. Ny havana dia manana fotoana sarotra amin'ny paroasy toy izany, satria "tia" ny mampianatra sy mampianatra, miditra amin'ny anjara asan'ny moralista ety. Mandresy lahatra ny fiainany manokana izy ireo, ary ny fanambaran'izy ireo dia marefo, manenika ary mandratra.
Antsoina hoe mivoatra, mivezivezy, satria mitranga izany indraindray. Mety hampiseho fahatsiarovana sy fisainana tsara tampoka ny marary, saingy tonga indray ny vanim-potoanan'ny psychosis. Ny fitsaboana ny dementia dia aorian'ny fandinihana, ny fanandramana fanehoan-kevitra amin'ny hetsika samihafa sy ny asa. Miaraka amin'io karazana aretina io, mieritreritra ny rehetra ny fiheverana, mikendry filozofia izy, lavitra ny zava-misy. Ny dementia dia mitarika ho amin'ny fihenan'ny fahalalan'ny gagoga sy ny fahaverezan'ny fahaiza-manao tena ilaina. Misy olana amin'ny fifantohana amin'ny saina.
Amin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ara-tsaina, manjavona ny faniriana hifandraisana. Mihamitombo tsikelikely ny marary. Amin'ny tranga tena goavana dia voatahiry ny fahaizan'ny môtera, saingy ny olona dia saika mandany fotoana foana amin'ny fanjakana. Tsy mifehy ny fizotran'ny fihinanana, ny filàna ara-batana izy ary tsy mamaly fanontaniana. Ny fisianà fitsaboana dia tsy mampino.
Ny zava-pisotro mifototra amin'ny alika dia miteraka fanovana tsy azo ovàna ao amin'ny vatana, manangana biochemika. Noho ny fisian'ny fanararaotam-pihetseham-po maharitra sy ny alikaola, ny fiankinan-doha sy ny aretina ara-tsaina, dia miteraka alikaola . Ny aretina ara-tsaina sy ny aretina dia hita ao amin'ny dingana 3 amin'ny fiankinan-doha amin'ny toaka. Ny asa lehibe rehetra momba ny saina dia simba na very tanteraka. Ny olona dia tsy mahavita mamantatra ny fampahalalana sy ny fisainana. Fijaliana sy fahatsiarovana mampalahelo.
Ny viriosy momba ny demokrasia dizitaly
Any amin'ny firenena slavy dia tsy mbola tanteraka ity olana ity, satria tafiditra tao amin'ny tontolo dizitaly izy ireo tatỳ aoriana tany amin'ny firenena tandrefana. Any Korea, ny demokrasia dizitaly dia efa fanaon'ny masoivoho ofisialy, izay nanomboka nametraka solontena ahitana taranaka vaovao izay manana Internet, manana smartphones, takelaka ary gadget. Ireo manam-pahaizana dia nanomboka nitandrina ny fahatsiarovan-dry zareo, ny fikorontanan'ny sainy , ny tsy fahampian-tsakafo, ny fahaketrahana sy ny fahaketrahana, ny fivoahan'ny fifehezan-tena, sns.
Ny fiovana toy izany dia azo ampitahaina amin'ny vokatry ny traumas craniocereberal (fanemorana ny ady amin'ny homamiadana amin'ny fomba mitovy amin'izany) sy ny fisehoana aloha. Maro ny mpahay siansa izay tsy manohitra ny fandrosoana ara-teknika, miresaka momba ny loza mety hitranga amin'ny teknolojia dizitaly ho an'ny atidoha mitombo. Ny zava-misy dia ny atidohan'ny atidoha sy ny fampivoarana hatramin'ny 20 taona, ary raha misy ankizy iray mitety an'izao tontolo izao, ary tsy ara-batana raha tsy misy ifandraisany amin'ny tontolo iainana, dia mihazakazaka na mijanona ny fananganana ny atidoha.
Ahoana no fomba fitsaboana ny devoly?
Rehefa mandidy fitsaboana, dia tena zava-dehibe ny mamantatra ny antony nahatonga ilay aretina, ary hanafoana azy ireo. Ny fitsaboana ny devoly dia ahitana ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny herin'ny atidoha, vasodilators, vitamins. Raha misy fanelingelenana ny fihetseham-po sy ny fitondran-tena, ny fampakaram-bady sy ny delirium dia omena fitsaboana aretin-tsaina, tranokely, sedra. Raha toa ka mahatratra ny dingana farany amin'ny fampandrosoana ny aretina ny idiô, dia ilaina ny mandamina fitsaboana sahaza azy, mitondra fitondran-tena amin'ny fandriana, pnemonia ary fahasarotana hafa.
Azo avy amin'ny fanafody nentim-paharazana:
Fanafody antidiarrheal natao ho an'ny fiainana. Ny tabilao avy amin'ny deemia dia manatsara ny fatran'ny metabolisma sy ny fifindrana ny foza nerve. Ireo no akatinol memantil, rivastigmine, cerebrolysin, ary ny hafa.
Ny neuroleptiques izay manamaivana ny fisehoan-javatra mahery sy ny fanahiana. Ireo no sonapaks, phenibut, phenazepam, ary ny hafa.
Antidepressants. Ity dia marlin, pyrlinol, clomipramine ary ny hafa.
Vitaminina avy amin'ny dementia
Ny vitaminina-antioxidants dia tsy afaka manakana ny fahalemena ara-tsaina sy ny fahatsiarovan-tena fotsiny, fa manamaivana ny fivoaran'ny dementia koa. Vitamin B12 amin'ny dementia, vitamin A, C, ary E. Vitamin B12 dia mety ho tombontso manokana, ary vitaminina A, C, ary E. Azonao atao ny manana fahaiza-manao ara-tsaina raha mahazo mineraly ampy - zinc, selenium, iodine, varahina, calcium, phosphorus, molybdenum, potassium, sns. Ny aretin'i Alzheimer dia hanampy ny fihinanana tsiranoka amin'ny asidra feno.
Herbida izay miteraka demokrasia
Maro ny fitsaboana nentim-paharazana izay manampy amin'ny fanatsarana ny toe-pahasalaman'ny marary amin'ny fikorontanana ara-tsaina. Ny aretina dementia dia azo ampiasaina amin'ny fanitsiana ny fanampiana amin'ny famoahana sy ny fiofanana voankazo isan-karazany - hawthorn, dioscorea Caucasian, anisate lofant. Ao amin'ny dingan-dohan'ny ambaratonga voalohany dia ilaina ny maka ny fananganana elecampane, ary na dia ny tombony lehibe kokoa aza dia mety hitondra ny famolavolana ny famokarana Ginkgo biloba. Hampitombo ny fahombiazany ary hampiakatra ny fiarovan-tena mety ho Eleutherococcus, Echinacea, Rhodiola rosea.
Devyasilovy ny divay
Ny fakan'ny elecampane dia 120 g;
divay mena - 0,5 litatra.
Mba hanomanana ny famokarana divay ny fakan'ny elecampane 120 grama amin'ny alàlan'ny fitaovana, dia asio ranom-boasary mena 0,5 litatra.
Atsofohy mandritra ny 10 minitra.
Mandehana amin'ny alalan'ny sivana ary misotroa menaka intelo isan-kerinandro alohan'ny sakafo.
voankazo misy savoka - 20 g;
rano tsotra - 200 ml.
Mba hanomanana ny famarotana ny voankazo voaozatra ao anatin'ny 20 g dia manangom-bary 200 ml.
Manaova fofona rano 15 minitra.
Tohizo 45 minitra.
Mandehana amin'ny sivana ary ento ny tady 1. L. intelo isan'andro isan'andro antsasak'adiny alohan'ny sakafo.
Ny sakafo dia tokony hiezaka ny hampihena ny lanjany, ny kolesterol ambany ary ny gliokosezy ao amin'ny ra. Ny sakafo dia tokony haniry amin'ny fibre, noho izany dia mila mihinana voankazo sy legioma betsaka, serealy. Ny sendikan'ny devoly dia hamoy ny toerany raha toa ka tsy miala amin'ny fahazaran-dratsiny ianao, mampitombo ny hetsika ataonao ary mihinana azy tsara, mandanjalanja.
Ny vokatra 10 voalohany manatsara ny fiasan'ny atidoha:
Nuts . Manana vitaminina B, asidra matavy ary mineraly manan-danja izy ireo izay mampivelatra ny fifindran'ny nerveuses ao amin'ny atidoha.
Ranomasin-dranomasina sy zafiafy . Manankarena amin'ny asidra matavy izy ireny.
Spinach . Manatsara ny fahaiza-manaony izy.
Chocolate . Mandamina fahatsiarovana sy manatsara ny fihetseham-po.
Cranberries ary akoho . Ireo beza ireo dia manankarena antioxidants, manala ny fiantraikany ratsy amin'ny radika maimaim-poana.
Green tea . Ny zava-pisotro misy polyphénols, izay miaro ny sela ao amin'ny atidoha amin'ny lozan'ny neurodegenerative.
Eggs . Izy ireo dia ilaina amin'ny fikarakarana ara-dalàna ny tranon'ny atidoha.
Tomatoes . Ny Lycopene ao amin'ny rantsany dia manampy amin'ny fametrahana ny atidoha amin'ny oksizenina.
Sakafo legioma .
Vary varimbazaha , manakana ny fivoaran'ny atherosclerose.
Ahoana no hanesorana ny fihetseham-po sy fihetseham-po?
Fihetseham-pihetseham-po sy fandaharana manokana
Sarintany mahaliana momba ny Holocaust
Famaritana ho an'ny vehivavy
Ahoana ny fomba hikendrena azy?
Manicure miaraka amin'ny vokatra ny fitaratra
Ny zavaboary mifono zava-mahadomelina avy amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao - tsara fanahy fa tsy tena
Miorina ao amin'ny style classic
Phytofilter ho an'ny akquarium amin'ny tanany manokana
Ny fitsaboana ny kohaka amin'ny zaza miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny
Ny fikolokoloana ho andraikitry ny fitantanana
Trano fahavaratra avy amin'ny bar iray - mamorona fankaherezana maoderina izahay
44 sary izay hanova ny hevitrareo momba ny vehivavy iray
Natalia Vodyanova dia nampiseho ny tarehin'ny zanaka lahimatoa iray voalohany
Ny patalohan'ireo vehivavy
17 fitsipika hotely, izay tsy lazainao amin'ny mpiasa
Voninkazo voninkazo ho an'ny voninkazo manokana
Sweetie Sweetie dia tsara sy ratsy
Fankahalana ny olona